Igwu mmiri ọdọ mmiri Manufacturer, Igwu mmiri ọrụ - Great Pool
ihe anyi nwere ike imere gi
Dabere na eserese ụkpụrụ ụlọ ị na-eziga, Greatpool na-enye otu nkwụsị nkwụsị maka imepụta miri emi nke ọdọ mmiri, akụrụngwa na-akwado yana ntinye teknụzụ.
Ngwa akụrụngwa Pool
25 afọ nke ọkachamara ọdọ mmiri mmiri ọgwụ na ngwá mmepụta
Nkwado teknụzụ ụlọ
Oversea Construction oru nkwado
Achọghị na-"dị nnọọ ọzọ na China na igwu mmiri COMlọ Ọrụ ”lọ Ọrụ"
Anyị bụ ndị a na-eweta ọrụ na-elekwasị anya na ngụkọta ngwọta maka igwu mmiri ọdọ mmiri oru ngo, na-enye ndị ahịa na keukwu omume nke oru ngo atụmatụ, imewe na-ewu ụlọ. Anyị na-atụ anya na anyị na ndị ahịa anyị nwere mmekọrịta chiri anya, na-emekọrịta mmekọrịta, ma bụrụ nnukwu onye na-akwado ndị nwere ndị nwere ọdọ mmiri, ndị ọrụ ngo, ndị na-ewu ụlọ na ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ. Anyị na-agba gị ka ị sonyere anyị igwu mmiri ọdọ mmiri dechara ngwọta customization otu na-amalite gị ọzọ ọdọ mmiri oru ngo ozugbo.
Dị ka ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ, Greatpool nọ na-ekere òkè na ọrụ ebere. Kwa afọ, ụlọ ọrụ anyị na-etinye 5% nke uru anyị na ego ọrụ ebere iji nyere ụmụaka nọ na mpaghara Tibet dara ogbenye aka ụlọ akwụkwọ.
nnukwu egwuregwuna-elekwasị anya oru ngo, na-enye omenala-ers na onye-nkwụsị ngwọta maka igwu mmiri oru ngo atụmatụ na imewe, na-eru miri emi, akụrụngwa ọkọnọ na echichi ， ntaghari ohuru na-ewu, oru ọrụ, wdg
Anyị dị njikere jeere gị ozi!
Ọrụ ọgwụgwọ mmiri - ole ...
25m * 12.5m * 1.8 m ime mmụọ ...
Rooftop Pool Ngwa, Igwu Pool Ngwọta, Igwu Mmiri Pool, Ọrụ Igba mmiri, Igwu Ulo Okpu, Igha mmiri nke Ọha,